Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 13/07/2020)
Milan ho any Roma By Train na Rome any Milan dia mora sy traikefa mahomby. Tsy lazaina intsony ny tarehy! Azonao atao ny maka mora kokoa fiaran-dalamby izay mety maharitra kokoa noho ny 3 ora nefa ny fiaran-dalamby avy ao Milan mankany Roma dia ahafahanao mitsambikina ao ilaina fiatoana mba hijery. Na afaka hitsambikina amin'ny fiaran-dalamby Freccia hafainganam-pandeha tsy tapaka ianao, izay maka fotsiny 3 ora sy 3 minitra, farafaharatsiny noho ny dia amin'ny fiaramanidina feno! Na inona na inona hanapahanao ity torolàlana haingana ity dia hanampy anao amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny tenanao sy ny fitsangatsanganana!
Best Train Ticket mpamatsy: Save A Train of course
Amin'ny Milan toy ny renivohitra, dia tsy mahagaga raha mpitsidika ondry any ny olona an-tapitrisany Lombardy isan-taona. Fa mihoatra noho ny lamaody amin'ny toerana tena, betsaka kokoa dia tsy maintsy mamangy any an-Lombardy faritra Italia mitaraina hotsidihina.
Tsy tambo ho isaina ny zavatra atao ao amin'io faritra io; Talanjona sunken fiarovana in farihy tsara tarehy, nitsidika ny lokanga ny atrikasa ao amin'ny tanàna manan-tantara, being amazed at the art and architecture of Mantua – Lombardy really packs a punch for visitors.
Mino isika Emilia Romagna mifanaraka mora foana ny manintona ny Tuscany malaza kokoa sy Lombardy sy ny tolotra temptingly takatry ny safidy noho ny mihinana ka zavatra ilaina. ny ny Milan ho any Roma By Train diany afenina tsara indrindra eo amin'ny heviny fa koa Roma ho any Milan lamasinina! Mitsambikina eny amin'ny gara sy ny handeha trandrahana!
Latsaky ny iray 30 minitra mitaingina ny fiaran-dalamby haingam-pandeha avy any Venice, Padua dia matetika loatra niraharaha avy ny ankamaroan'ireo mpitsidika. Na izany aza, izany no mahatonga ho iray andro lehibe nankany amin'ny Venise, manolotra ny topimaso ho any an- manan-karena tantara ny tanàna indray mandeha dia mahery Kaominina.
Home an'i Italia faharoa oniversite tranainy indrindra, naorina in 1222, Padua dia nihazona ny vivacious rivo-piainana ao amin'ny oniversite tanàna, amin'ny velona sy ny piazzas arcaded arabe, betsaka ny trano fisotroana kafe mihidy izay ny ubiquitous Spritz dia de rigueur rivotra toy ny andro any an-paharivan'ny andro. Tandremo sao tsy mahita avy!
Fa na iza na iza nandeha ny Milan ho any Roma miaraka amin'ny Trenitalia Trains na ny fomba hafa manodidina ny lalana ary mitady latsa-layered, unvarnished ary matetika amim-pahasahiana tena Travel traikefa.
Manoro hevitra anao izahay ho any Genoa (izay toy ny Venise dia indray mandeha isan-mahery maritime repoblika) fronting ny Ligurian Ranomasina. Fanolorana kokoa manta sy ny tena traikefa, hahazo undiluted fahatsapana ny tantara, sy hiaina ny citys sehatra manan-karena sy ny zavakanto miavaka trano. One of the top reasons we enjoy it so much is that dia be ny zavakanto sy ny tranombakoka dia uncrowded! Afaka mahita miasa amin'ny Caravaggio, Sur Dyck. Rubens, Durer sy Veronese ao amin'ny Palazzo Bianco sy ny Palazzo Rosso sy ogle hafa ny Taloha izao Tontolo izao sangan'asa maro ny toerana, toy ny Palazzo Reale sy ny Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Misy ihany koa ny tsara ohatra ny Genoese Sekolin'ny kanto, malaza tamin'ny taonjato faha-17, ao amin'ny Palazzo Blanco.
Ny hafainganam-pandeha avo Trenitalia High Speed (AV) fiarandalamby miala Milan Central Station indray mandeha na indroa isaky ny adiny iray ho an'ny Roma Termini toerana - eo ho 90 fiaran-dalamby isan'andro. Ny fiaran-dalamby Trenitalia voalohany ravina Milan Central Station amin'ny 5:00 a.m. Ny farany fiaran-dalamby ho any Roma ravina ao Milan 11:18 p.m.
Italiana maro be ny tapakila fiaran-dalamby any Italia. Ivotoerana elektrika eo amin'ny sezonao mba hanomezana fitaovana ary koa ny WiFi eny ambony sambo Frecciarossa sy Frecciargento. Na izany aza, hianjera ny famantarana raha ianao ato anaty tonelina ary amin'ny foibem. Afaka manana toeram-pivarotana italiana lehibe ianao amin'ny fiara fitaterana sakafo isaky ny fiaran-dalamby. Ary koa ny sakafo ny hovidiana izay mitondra snacks, mofo voasesika, ary ny zava-pisotro ny seza. Rehefa tapitra ny fiara tsirairay, dia hahita ny trano fivoahana sy be racks mba hitahiry lehibe entana.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Milan To Roma Miaraka amin'ny lamasinina Trenitalia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/milan-rome-train/ – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)